IMalawi ivulekele uKhenketho lwaMazwe ngaMazwe
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba ezahlukeneyo » IMalawi ivulekele uKhenketho lwaMazwe ngaMazwe
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zaseMalawi zokuPhula • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Isikhululo senqwelomoya saseKamuzu eMalawi sivulelwe ukuthengisa ngenqwelomoya ukusuka nge-1 kaSeptemba 2020. Kuphela linani eliqingqiweyo leenqwelomoya eziye zavunyelwa ukuba zisebenze okokuqala ukwenzeka nge-5 kaSeptemba.
Bonke abakhweli abafikayo kwiRiphabhlikhi yaseMalawi kufuneka bavelise isatifikethi esibi seSARS Cov-2 PCR esifunyenwe kwiintsuku ezili-10 phambi kokufika eMalawi. Nawuphi na umkhweli ngaphandle kwesiqinisekiso esichaziweyo uyakwalelwa ukungena.
Ukufika kwabagibeli kuya kufuneka baqhubeke nokuzimela bodwa iintsuku ezili-14 ngexesha abaza kulandelwa ngalo ngabasemagunyeni bezempilo.
Abahambi banokucelwa ukuba babonelele ngeesampulu zovavanyo lwe-COVID-19. Iisampulu ziya kuqokelelwa kwisikhululo seenqwelomoya kwaye iziphumo zovavanyo ziya kwaziswa abo bachaphazelekayo kwiiyure ezingama-48. Nawuphi na umkhweli obonisa iimpawu uya kuphathwa ngokungqinelana nezikhokelo ezithile ezibekwe ngabasemagunyeni bezempilo.
Abahambi kufuneka bagcwalise kwaye bangenise iifom zokuHlolwa kwezoKhenketho (TSF) eziza kwenziwa zifumaneke kwinqwelomoya okanye kwisakhiwo sesikhululo seenqwelomoya. Iifom ziya kugqithiselwa kubasebenzi bezempilo kwisakhiwo sokugcina.
Bonke abahambi kunye nabanikezeli beenkonzo bayacelwa ukuba baqwalasele iinkqubo zolawulo losulelo ezinjengokuphambuka ekuhlaleni, ukuhlamba izandla nokucoca, nokunxiba iimaski zobuso njengoko kufanelekile. Amaqondo obushushu emzimbeni aya kujongwa kwiindawo ezahlukeneyo zeqhinga.
Abemi base-US abafuna ukufaka isicelo sokwandiswa kwevisa okanye ukongezwa kwemvume yokuhlala banokutyelela nayiphi na iOfisi yokuFudukela eMalawi ekufuphi ukuze bafake isicelo. Ngolwazi oluthe kratya, ndwendwela i-Malawi Immigration iwebhusayithi: https://www.immigration.gov.mw/
Akukho mthetho ubekiweyo endaweni kwaye akukho zithintelo ekuhambeni okanye ukuhamba phakathi. Iinketho zothutho lukawonkewonke zilinganiselwe kakhulu eMalawi. Ezo zisebenzayo ziibhasi ezincinci zabanini zabucala, iiteksi ezihamba nezithuthuthu kunye neebhayisikile. Iibhasi ezilindelweyo ukuba zinciphise abakhweli kwaye zifuna ukusetyenziswa kwemaski kunye nokuhamba kude ekuhlaleni.
Iminyhadala, iminyhadala yezemidlalo, kunye neminye imisebenzi emikhulu enabantu abangaphezulu kwe-10 bavinjelwe ukukhululwa kwiinkonzo zonqulo nakwimingcwabo. Ezi nkonzo zimbini zokugqibela zinokuba nabantu abangama-50 abazimeleyo ababonelele abantu ngokuhambelana nemida yokuthintela umgama ekuhlaleni kunye nemilinganiselo yococeko.
Iindawo zokutya ezikhawulezayo, iivenkile zokutyela, kunye neendawo zokutyela zikawonke wonke zivaliwe ngaphandle kweenkonzo zokususa. Urhulumente waseMalawi ubeke imithetho eyenza ukunxiba imaski yobuso kuyo yonke indawo yoluntu kunyanzelekile, kwaye abo bangayilandeliyo le migaqo banokujongana nokohlwaywa. Kukho isohlwayo se-10,000 MWK (i-US $ 13) ukuba nabani na akaphumeleli ukuthobela imigaqo yoRhulumente waseMalawi ngokubhekisele kuthintelo lokuphambuka eluntwini kunye nokunyanzeliswa kwesigqubuthelo sobuso.
EMalawi, zingama-5,576, 19 iimeko eziqinisekisiweyo ze-COVID-3,420 kwilizwe liphela nezingama-175 ezifunyenweyo nezigulana kunye nokusweleka okunxulumene nokusweleka ngo-Septemba 1, 2020. Urhulumente waseMalawi umilisele amanyathelo okuthintela ukusasazeka kwentsholongwane.